राजपा–फोरम गठबन्धनलाई भोट किन ? - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता राजपा–फोरम गठबन्धनलाई भोट किन ?
आम मधेसी जनताको चाहना र मधेशका बुद्धिजीवि तथा सजग बर्गको आपेक्षा अनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को गठबन्धनबाट हामी उम्मेदवारहरु यतिखेर चुनावी मैदानमा छौं । हाम्रो जित–हारको निर्णय हुने मात्र यो समय होइन, मधेसी एकता नारा र मधेसी तथा परिवर्ततनकामी जनताको परिक्षणको घडी पनि हो ।
आन्दोलनमा ज्यानको आहुति दिन तयार हुन्छौं हामी । राजनीतिक शक्ति एकत्रित गर्ने अवसरको रुपमा आउने चुनावमा भने सधै हामी चुकिरहेका हुन्छौं । यो क्रम पुनराबृति हुने हो, कि परिवर्तनको नयाँ इतिहास लेखिने हो ? इतिहासले मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम र परिवर्तन तथा समानताको पक्षमा रह्ने न्यायप्रेमी जनता, आम मतदाता, बौधिक समाज र कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई परिक्षाको कस्सीमा पुर्याएको छ ।
लामो आन्दोलन र संघर्षपछि आंसिक रुपमा अधिकारको लडाई सफल र मधेस मुद्दाको ब्यापीकरण, राष्ट्रियकरण र अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । सदियौंको केन्द्रीत राज्य सता र साशकीय अभ्यासले बिभेदलाई संस्थागत गरेको राज्यभित्र समान अधिकार र सामान शक्ति स्थापीत गर्न पछिल्लो आन्दोलन भएको थियो । त्यसमा सहादत दिएका वीरहरुको सपना, घाइते भएका आन्दोलनकारीहरुको त्याग र आम मधेसीजनको संघर्ष तथा लगानीको सम्मान गर्न र लोकतन्त्रलाई पुर्णता दिनका लागि राज्यको बिभेदकारी स्वरुपको अन्त्य गर्न संबिधान संसोधन नभइ नहुने कुरा हो ।
अबको चुनावी मध्यान्तरपछिको देशको नयाँ राजनीतिक सत्र नै हामीसँग न्याय हुने कि अझ बषौंसम्म हामीले संघर्ष नै गरिरह्नु पर्ने भन्ने तय गर्ने छ । त्यस कारण चुनावमा हामी सबैको भुमिका हाम्रो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने छ । आफुसंगको बिभेद बिरुद्ध र न्यायको पक्षमा हामी उभिने कि बहकिएर आफ्नै अजेण्डालाई कमजोर पर्ने भन्ने हो । भावना र अजेण्डालाई मतमा रुपान्तरित गरी मधेश मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति प्रदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । मधेस आन्दोलनको पृष्ठभुमी लामो र संघर्षपुर्ण छ ।
नेपालका बिभिन्न आन्दोलनहरुको फलस्वरुप राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्ने अभिभारासहित नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ जारी हुँदा, राज्यको असमावेसी तथा केन्द्रीकृत साशकीय चरित्र, ब्यवहार र अभ्यासलाई चिरेर मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला लगायत बर्ग र समुदायको राज्यभित्र सामान पहुँच, अधिकार र शक्ति स्थापीत गर्न अर्को नयाँ चरणको आन्दोलनको माग इतिहासले गर्न थालेको थियो । सदियौंदेखीको थिचोमिचो बिरुद्ध २०६३ साल माघ २ गतेदेखी मधेश आन्दोलनको प्रस्फुटन भयो । राज्यले आन्दोलनकारी शक्ति मधेसी जनाधिकारी फोरम नेपाल (हालको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल)संग सहमति गरेर पनि त्यसलाई पुरा नगर्ने बेइमानी देखायो । फेरी २०६४ साल फागुन १ देखी अर्को मधेश आन्दोलन सुरु भइ उचाइप्राप्त गर्यो ।
यसवीचमा पचास बढी मधेसी सपुतहरुले सहादत दिनु पर्यो । फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति सरकारले ग¥यो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा ‘संघीयता’, ‘समानुपातिक’ र ‘समावेसी’ जस्ता शब्दले प्रवेश पाउनु हो । तर राज्यले मधेसीलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा, पहिचान सुरक्षित हुने गरी राज्य पुर्नसंरचना गराउने सवालमा, मधेस तथा मधेसीलाई सम्मानजनक सम्बोधन गर्ने सवालमा, नागरिकताका सवाल लगायतमा अझै पनि बेइमानी कायम गरी नयाँ संबिधान ल्याउन खोजेदेखी हामीले गरेको थियौं पछिल्लो मधेस आन्दोलन । जसलाई बेवास्ता गर्दै नश्लवादी तवरमा र मधेसीलाई ब्यक्तिगत सत्रु सरह ब्यवहार गर्दे राज्यले दमन गर्यो ।
मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्यले गरेको प्रतिबद्धतालाई लत्याउदै हामी मधेसीको टाउको र छातिलाई निशाना बनाइयो । सदनमा हाम्रो संख्यात्कम उपस्थिती कम हुनु हाम्रो कमजोरी रह्यो । बलजफ्ती संबिधान ल्याइयो, त्यसलाई संसोधन गर्न काँग्रेसको भुमिका इमान्दार देखिएन । एमाले खुलेरै बिरोधको नाङ्गो नाच मात्र गरेन त्यसका नेताहरु मधेसीलाई अपमान र अपहेलित गर्न कुनै कसर बाकी राखेनन् । परिवर्तनकारी शिक्ति भनिभएको माओवादी पनि वास्तविक रुपमा मधेसका जनतालाई समान असिधकार दिने सवालमा बिरोधी नै देखियो र नश्लवादी चरित्र देखायो । अहिले फोरम–राजपा गठबन्धन मधेसको परम् बिरोधी बाम गठबन्धन र मधेससंग बेइमानी गर्ने काँग्रेस संग चुनाव लड्दैछ ।
यस लडाईलाई सबै मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम र परिवर्तन तथा समानताको पक्षमा रह्ने न्यायप्रेमी जनताले् एक जुट भएर लड्नु पर्छ । हाम्रो शक्ति हाम्रो प्रतिनिधित्वमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । हामी सबैले फोरम–राजपा गठबन्धनलाई मतदान गर्नु पर्छ । आज देश संघीय संरचनामा गएको छ, भने त्यो मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो । पछिल्लो पटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले उठान गरेको आन्दोलनका न्यायसंगत मागहरु पुरा नहोस भनेर प्रमुख भनिएका दलहरुको ध्येय देखिन्छ । त्यसलाई चिर्दै संबिधानलाई बिभेदरहित बनाउन हामी यतिखेर निर्वाचनमा होमिनु परेको हो । अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक अवरसर निर्वाचनमा हाम्रो भागिदारीको रुपमा प्राप्त भएको छ । नयाँ संविधानलाई बिभेदरहीत र सर्वस्विकार्य बनाउने मुद्दा अझै थाती छ । शासन, प्रसाशन र विकासमा किनाराकृत गरिएका जनता र क्षेत्रको पक्षमा सशक्त रुपमा भुमिका गर्न फोरम–राजपाका प्रतिनिधीहरुको बहुमत उपस्थिती केन्द्रीय सँसद र प्रादेशिक सदनमा हुनुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यक्ता हो । फोरम–राजपाका गठबन्धनका उम्मेदवारलाई अत्याधीक बहुमतसाँथ निर्वाचित गर्न न्यायप्रेमी जनतामा सादर अनुरोध छ ।
Previous articleचुनावी क्षेत्रमा हरिनारायणको सक्रियता,कांग्रेस–एमालेका सयौं नेता कार्यकर्तालाई फोरममा भित्र्याए
Next articleप्रदेश २ मा अपराध बढ्दै